Global Voices teny Malagasy » Azerbaijan: Navotsotra ireo ‘bilaogera ampondra’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Febroary 2019 3:37 GMT 1	 · Mpanoratra Onnik Krikorian Nandika Miranah
Sokajy: Azerbaijan, Hafanam-po, Mediam-bahoaka, Solovava, GV Mpisolovava
Navotsotra tamin'ny faran'ity herinandro ity ireo tanora mpikatroka bilaogy lahatsary ao Azerbaijan, repoblika sovietika teo aloha manankarenaika solika. Nogadraina tamin'ny 8 Jolay 2009 i Adnan Hajizade , mpiara-manorina ny OL! Youth Movement, sy Emin Milli , mpiara-nanorina ny Alumni Network (AN) rehefa avy nodarohana mafy raha niara-nisakafo hariva tamina vondrona fiarahamonina sivily hafa sy tanora mpikatroka tao amin'ny trano fisakafoanana mihaja iray ao an-tanànan'i Baku.
Rehefa avy nitatitra ny tranga tany amin'ny polisy, dia notazonina nandritra ny 48 ora indray ireo mpikatroka roa ary avy eo nogadraina vonjimaika . Tamin'ny fotoam-pitsarana azy ireo farany tamin'ny 11 Novambra 2009, dia notanana am-ponja nandritra ny efa-bolana i Hajizada sy Milli. Naneho ny ahiahiny ireo mpikatroky ny zon'olombelona ao an-toerana manoloana ny fitondrana ny raharaham-pitsarana izay nifarana tamin'ny fanasaziana 2 taona an-tranomaizina ho an'i Hajizade sy 2 taona sy tapany ho an'i Emin Milli  .
Nanameloka ny didim-pitsarana ny Prezidansan'ny Firaisambe Eoropeana, ny Antenimiera Parlemantera ao amin'ny Filankevitry ny Eoropeana (PACE), ny Fikambanana ho an'ny Fiarovana sy ny Fiarahamiasa ao Eoropa (OSCE), ny Mpanaramaso ny Zon'Olombelona sy ny Reporters Sans Frontières. Lasa lavitra mihitsy ny Amnesty International, tamin'ny fandraisana azy roalahy ho gadra noho ny fanehoan-kevitra .
Na dia teo aza ny ezaka natao vao haingana mba hamotsorana vonjimaika azy roalahy, ankoatra ny antso nataon'ny filoha amerikana Barack Obama sy ny Sekreteram-panjakana amerikana Hilary Clinton, vitsy tamin'ny mpanohana azy ireo no nino fa ho afahana alohan'ny hanatanterahany hatramin'ny farany ny saziny izy ireo. Na dia izany aza, tamin'ny fivoaran-draharaha tsy nampoizina, nandidy ny famotsorana vonjimaika an'i Hajizade ny fitsarana ambony omaly raha navotsotra androany maraina kosa i Milli.
Mino ny mpanara-maso iraisampirenena sasany fa tadiavin'ny governemanta Azerbaijaney ny famotsorana azy hanesorana ny tsikera iraisampirenena momba ny fifidianana solombavambahoaka notontosaina tamin'ity volana ity. Na izany aza, tamin'io andro io ihany koa no navotsotra i Hajizade, notazonina noho ny antony tsy fantatra mazava teo amin'ny sisintany mifanolotra amin'i Zeorzia mpifanolo-bodirindrina ihany koa i Baxtiyar Haciyev, mpikatroka iray sady mpilatsaka hofidiana tsy nahomby tamin'ny fifidianana nampiady hevitra.
Na inona na inona antony namotsorana azy ireo, dia manizingizina ny maha-tsy manan-tsiny azy ireo i Hajizade sy Milli, nilaza fa natao ny fanafihana voalohany mba hanakanana azy ireo tsy hanohy ny fikatrohana. Samy nikarakara valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izy roa lahy herinandro vitsy monja talohan'ny nisamborana azy ireo, nitsikera ny fanitsiana ny lalàna mifehy ny fikambanana tsy miankina sy ny vaovao fa naondrana tao amin'ny firenena hahazoana dolara an'aliny ireo ampondra.
Noho i Hajizade nitafy akanjo ampondra tamina horonantsary , dia nanjary nalaza ho ‘bilaogera ampondra’ ireo mpikatroka roa ireo taorian'ny fisamborana azy ireo. Mampiasa YouTube mafy mba hanapariahana ny lahatsarin'izy ireo, nanontanian'ny RFE amin'ny teny Azerbaijaney izy ireo raha mbola hanohy ny bilaogy, tsotra ny valintenin'i Hajizade. “Eny, eny”, hoy izy no sady nandao ny efitranom-pitsarana, na dia teo aza ny famotsorana misy fepetra azy roa lahy. “Bilaogy lahatsary.”
Azo jerena ao amin'ny Caucasus 2009 Blog Review  an'ny Global Voices ny tantara nofintinina momba ny raharaha fanagadrana an'i Adnan Hajizade sy Emin Milli ary koa ny fanentanana ho famotsorana azy ireo.
Emin Milli (ankavia) tafaray tamin'i Adnan Hajizade (ankavanana) taorian'ny famotsorana azy ireo tamin'ity herinandro ity. Sary via @leylanajafli .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/28/135284/
 Nogadraina tamin'ny 8 Jolay 2009 : https://globalvoicesonline.org/2009/07/08/azerbaijan-youth-activists-beaten-and-detained/
 avy eo nogadraina vonjimaika: https://globalvoicesonline.org/2009/07/11/azerbaijan-youth-activist-blogger-sentenced-after-trial-behind-closed-doors/
 fanasaziana 2 taona an-tranomaizina ho an'i Hajizade sy 2 taona sy tapany ho an'i Emin Milli: https://globalvoicesonline.org/2009/11/11/azerbaijan-bloggers-sentenced/
 fandraisana azy roalahy ho gadra noho ny fanehoan-kevitra: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/jailed-azerbaijani-bloggers-adopted-prisoners-conscience-20091112
 nandidy ny famotsorana vonjimaika an'i Hajizade : https://globalvoicesonline.org/2010/11/18/azerbaijan-twitter-reaction-to-video-blogging-activists-release/
 navotsotra androany maraina kosa i : https://globalvoicesonline.org/2010/11/19/azerbaijan-emin-milli-released-but-another-activist-detained/
 nitafy akanjo ampondra tamina horonantsary: http://www.youtube.com/watch?v=Aaecvg7xCIk&feature=channel_page